December 2020 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
guuleed	 Dec 31, 2020 0
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 17-05–1442 …
Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa Khamiis, Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 16-05-1442 oo waafaqsan 31-12-2020, Warka…
guuleed	 Dec 30, 2020 0
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 16-05–1442 …
Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa Arbaco, Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 15-05-1442 oo waafaqsan 30-12-2020, Warka…
Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa Arbaco, Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 15-05-1442 oo waafaqsan 30-12-2020, Warka …
Afar askari oo koonfur galbeed looga dilay Diinsoor.(Maqal)
Ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay fuliyay dagaallo iyo duqeymo ka dhan ah ciidamada Ugandha,Jabuuti,Kenya,Itoobiya iyo kuwa la socda ee katirsan dowladda iyo maamul gobaleedyada Jubaland iyo koonfur galbeed.…
Gudoomiyaha degmada Dayniile oo ka badbaaday qarax.
Maxamed Abuukar Jacfar oo ah gudoomiyaha degmada Dayniile maamulka Gobalka Banaadir ee dowladda federaalka ayaa xalay ka badbaaday isku day dil. wararka naga soo gaaraya degmada Dayniile ayaa sheegaya in qarax xooggan uu ka dhacay guri…
Axmad	 Dec 29, 2020 0
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 15-05–1442 …
guuleed	 Dec 29, 2020 0
Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa Talaado, Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 14-05-1442 oo waafaqsan 29-12-2020, Warka…